Ny androaniko | Oktobra 2007
[Ankapobeny ] 22 Oktobra, 2007 23:51
Ho feno folo volana ny namana seraserako !!!
Ny serasera sy ny namana serasera moa ity mankalaza ny fahavalo sy ny fahadimy taonany, izaho hankalaza ny fahafolo volana nifaneraserana taminareo teto afaka andro vitsivitsy (efa mba hahazo taona atsy ho atsy, lol).
Dia lasa ny saina hoe inona tokoa moa no nahatonga ahy nanokatra blaogy sy lasa tafiditra lalina amin’ity raharaha manga ity, izaho ilay badovavy fahiny ?
Ny taona moa nitombo dia nampitomboina koa ny fianakaviana ; nitombo koa ny olom-pantatra sy ny namana – be koa ireo mpiray tanindrazana nihavy nanampy isa, ka isan’izany i sefo Hery.
Mandroso moa ny tany dia mba nampandrosoina tato an-trano koa ity kopitera mba hialana amin’ny habadoana fa tsy vitan’ny hoe “ny ankizy ankehitriny mpanangana ny taona roa arivo” intsony ny tanjona, fa “izay tsy mahay kopitera no badon’ny taona roa arivo” ka tsy maintsy niezaka niala tamin’izany tokoa.
Ka ity namana sefo Hery ity izany no nasesiky ny razana hanampy ny tena amin’izany katrok’asa mafonja izany. Isaorana ny Avo fa raha faharetana dia ananan-dranamana ity marina mafy, niaiky aho! Tsiky ihany ny azy dia ampy fa tsisy bedy izany mihitsy an, ramose tsy mba masiaka !!!
Ka indray andro ary nanao fety izahay tato an-trano dia naka sary mazava ho azy. Ny paositra elekitronika moa mba efa nananana. Dia mba ni-zesta hoe alefaso paositra ilay sary rehefa vita ry Hery. Tonga ny ampitso ity rohy ity fotsiny no nalefany paositra, sy hoe “Efa ao anaty blaogy ny sary fa alaivo ao. “
Inona angaha ity blaogy ??? Hitanay taiza izany blaogy izany fa bilao azo ifampitorahana no hainay koh. Dia klikena hono ity rohy dia namoaka soratra sy sary tokoa. Dia nalaina tokoa ny sary rehefa avy natoro tsara ny fanaovana azy, dia nohidina ity pejy fa tsy fomba mijerijery sekrén’olona... Tsy mba nandalina ilay saina mba nanadihady hoe inona hono itony e?
Fa mba nizesta tany amin’ny hafa kosa anefa avy teo an : “efa azo daholo ny sary tao an-trano tamin’ny “versera”, efa nomen’i Hery tamin’ny blaoginy”, nefa toa tsy mba nisy iray nanontany hoe inona ity blaogy = ny tena irery izany no tsy mahay izany blaogy izany raha dinihina ka aleo mody fanina.
Nandeha ihany ny fotoana, isaky ny mahazo mailaka avy amin’i sefo dia ity no soratra ao :
From: Eugene Heriniaina <hery@serasera.org>
patati et patata et patati et patata
Inona no misakana anao tsy hiblaogy?
“Inona no misakana anao tsy hiblaogy” io ihany no hitako eo isaky ny mihetsika.
Ny tena mba manontany hoe maninona no asianao an’io foana, dia averiny amiko ilay fanontaniana nilako valiny : inona no misakana anao ? Ka rehefa nazavainy tsotsotra ilay izy dia nazava fa ny tsy fahaizako sy ny hakamoako no misakana ahy fa “raha tsy hay hono tsa hibitabitahana”.
Kanefa moa rehefa zavatra lazaina anao isan’andro – goutte d’eau chinoise, hihihi – dia toa miketriketrika ihany ny zanak’atidoha amin’ny farany hoe “maninona tokoa moa raha jerena akaiky ny momba an’io !”
Ka dia tonga ity andro lehibe rehefa tsy nahaleo ny piblisité-n’ingahirainy dia nisokatra tamin’ny 8 janoary ny blaogy.com-n’ikalamako ; ary ny 30 janoary kosa ny blaogy.org
Saika kivy aloha tamin’ny voalohany fa sady efa tsy hay ity izy, izay lazaina toa tsy hita, mbola nivatravatra fihavy daholo koa ireo mpitsidika (efa aty aoriana ry tokinao vao mibaboka fa izy indrindra no tena be fihavy tao, lol). Ilay ps koa aloha no tena nahatonga izany e, fa anarana moa iny an-tanim-boanjo, samy manao izay mahabotrabotra azy avy : “l’habit ne fait pas le moine” hono koh !
Nony hay indray ny blaogy dia nasain’i angie sy hery nikarajia indray. “Hay ve izao izany mi-chat randraikakiko o !”, hihihi, kanjo nangatahan’i angie pv ka loza fa tsa hay sy tsa hitan’i vendrana inona angaha izany, aiza koa misy izany. Fa dia nilofo tokoa nianatra ka dia nahay nony farany hoe: mankao an-dakozia fa tsy ao amin’ny salon miaraka amin’ny olona rehetra. Hay re rey olona ka tao an-dakozia tao ikalamako efa be kil mpanao combien, ankoatra ireo tsy mahandry lakozia fa tonga dia ao amin’ny salon no miady varotra...Fa tsy naharatsy fihavanana kosa klou ny varotra tsy raikitra e, manja iny !
Dia izao efa mba mamaky forum – “mora mahazo moa aho ry Hery rehefa hazavaina maharitra o ?” , mamaky ireto gidragidra tsy mety lany, mitety ny pejin’ny namana maromaro dia mandrangodrangotra eny, dia mihaino RadioVazoGasy sy mahay mampiditra hira mihitsy aza an, attention hein !
Dia izao efa manomboka voaisy loha koa ny ps sasantsasany, fa ny ambiny mbola vinaninaina satria “tsy mbola nampiditra momba anao ianao dia tsy afaka mijery ny mombamomba ny namana sy ny sariny”.
Dia inona moa izany fa dia misaotra ny mpampianatra indrindra indrindra, ary misaotra koa ireo rehetra manaiky ho namana. Ho ela velona !